Ireo lahatsoratr'i Fahad Fareed momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Fahad Fareed
Fahad Fareed is the Product Marketing Manager at Data tohatra – orinasa lehibe amin'ny famahana olana sy ny kalitaon'ny data. Nalaina avy amin'ny traikefany niasa tao amin'ny ETL sy ny indostrian'ny kalitaon'ny data, i Fahad dia nanoratra ny hevi-baovao sy toro-hevitra farany ho an'ny mpamorona sy ny mpanatanteraka C-suite mba hanampiana azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fanatonana ireo hetsika fitantanana data.
Adiresy manara-penitra 101: Tombontsoa, ​​fomba, ary toro-hevitra
Zoma, Febroary 11, 2022 Zoma, Febroary 11, 2022 Fahad Fareed
Oviana no fotoana farany nahitanao ny adiresy rehetra ao amin'ny lisitrao manaraka endrika mitovy ary tsy misy hadisoana? Sanatria, sa tsy izany? Na dia eo aza ny dingana rehetra mety horaisin'ny orinasanao mba hanamaivanana ny hadisoana angon-drakitra, dia tsy azo ihodivirana ny olana momba ny kalitaon'ny angon-drakitra - toy ny diso tsipelina, ny saha tsy hita, na ny habaka lehibe - noho ny fampidirana data amin'ny tanana. Raha ny marina, ny Profesora Raymond R. Panko tao amin'ny taratasiny navoakany dia nanasongadina fa ny hadisoan'ny angon-drakitra amin'ny spreadsheet indrindra fa ny angona kely dia mety